by Kyaw Htike Aung August 24, 2017 022
ယခုအချိန်မှာတော့ Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး Galaxy Note 8 ကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Galaxy Note 8 ဟာ အရွယ်အစား ၆.၃လက်မရှိပြီး Quad – HD + Bezel – Less infinity Display ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ RAM 6GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Snapdragon 835 နဲ့ Exynos 8895 Chipset များထည့်သွင်းထားပါတယ်။ inbuilt storage 64GB/128GB/256GB ထိပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး MicroSD Card ကို 256GB ထိ တိုးမြှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကို 3300mAh ရှိတဲ့ ဘက်ထရီကို တပ်ဆင်ထားပြီး Samsung S-Pen ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ S Pen ဖြင့် ရေးသားထားတဲ့ စားများ၊ ပုံများကို ပေးပို့နိုင်တဲ့ Live Message feature လဲပါဝင်ပါတယ်။
နောက်ကျောဘက်မှာ 12MP ရှိတဲ့ Dual ကင်မရာပါဝင်ပြီး အဆိုပါ ကင်မရာနှစ်လုံးစလုံးမှာ Optical Image Stabilization နည်းပညာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Background Blur ကို ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင် ချိန်ညှိပေးနိုင်တဲ့ Live Focus စွမ်းဆောင်ချက်လဲ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ App တစ်ခုကို ဆင့်ပွားအသုံးပြုနိုင်ပြီး Samsung ရဲ့ Bixby Digital ကိုယ်ရေးလက်ထောက်နည်းပညာလဲ ထည့်သွင်းထားပေးပါတယ်။ အဆိုပါ Note 8 ကိုတော့ Android 7.1 Nougat ဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး Maple Gold, Midnight Black, Deep Sea Blue နဲ့ Orchid Grey ဆိုပြီးအရောင် ၄မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းကို သြဂုတ်လ ၂၄ရက်နေ့ကနေ စတင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ၉၃၀ ဒေါ်လာဖြင့် ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီး Gear 360 ကင်မရာ၊ 128GB microSD နဲ့ Wireless Charger တို့ အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Note8 ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကတော့
6.3-inch Quad-HD+ “Infinity Display” [Super AMOLED panel].
Snapdragon 835 [Adreno 540 GPU] or Exynos 8895 processors [Mali-G71 MP20 GPU].
64/128/256GB of inbuilt storage.
MicroSD card slot support for storage expansion up to 256GB.
8MP front facing camera sensor withawide-angle lens and f/1.7 aperture.
IP68 rated for dust and water resistance for up to 1.5 meters for 30 minutes.
3300mAh battery with wireless charging support and fast charging technology on both wireless and wired charging.
Bixby Virtual Assistant support with dedicated Bixby button.
Honor Note9ရဲ့ ပုံရိပ်များထွက်ပေါ်
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 5.7 inch ရှိတဲ့ QHD Display နဲ့ 13MP Dual ကင်မရာပါဝင်တဲ့ LG G6 စမတ်ဖုန်းကို အိန္ဒိယမှာ 51990 ဖြင့် ရောင်းချ
Apple ရဲ့ နောက်ထွက်ရှိမဲ့ iPhone 8 အတွက် OLED Panels သန်း ၇၀ ဖိုး Samsung ကထုတ်လုပ်ပေး